SONGZ Ubuchwepheshe | ISongz Automobile Air Conditioning Co., Ltd.
Isungulwe ngoJuni, 2011 futhi izinze eShanghai, i-Air Conditioning & Refrigeration Research Institute isungule izikhungo ze-R & D emadolobheni ahlukene e-China, njenge-Beijing, i-Chongqing, i-Nanjing, i-Hefei, i-Liuzhou, i-Suzhou ne-Xiamen lapho ikakhulukazi isizinda sokukhiqiza se-SONGZ futhi manje sesinayo izikhungo eziningi zezobuchwepheshe zesifundazwe nezomasipala kanye nochwepheshe bezobunjiniyela abangaphezu kwama-350, phakathi kwabo labo abaneziqu eziphambili nangaphezulu balinganiselwa ngaphezulu kwe-10%.
I-Research Institute ifake isicelo samalungelo obunikazi angaphezu kuka-400, kufaka phakathi amalungelo obunikazi angaphezu kuka-100 okusungulwa, futhi yakha izindinganiso ezi-2 zikazwelonke, amazinga amathathu embonini namazinga angaphezu kwama-40 ebhizinisi. Isikhungo Sokucwaninga sisebenza ngokubambisana embonini-eyunivesithi nocwaningo namakolishi namanyuvesi anjengeShanghai Jiaotong University, iTongji University neShanghai University of Science and Technology ekuqhubekeni kobuchwepheshe, ukuthuthukiswa kwenqubo yezimboni, ukutshalwa kwamathalente aphezulu nokushintshisana ngezifundo.
Ngo-2018, ngemuva kokuthi i-SONGZ ithole futhi yabamba amasheya eFinland Lumikko, kwakhiwa isikhungo se-R & D eYurophu.
I-SONGZ Patent Display
Ingqondo ye-R & D
Ngokuya ngebhizinisi eliyinhloko le-SONGZ emkhakheni we-conditioner air bus, i-air conditioning yezimoto, i-air conditioning transit air conditioning, amayunithi wefriji yeloli, isikhungo somoya nocwaningo lwefriji sisebenza ku-construciton nokusetshenziswa kwamakhono ayisisekelo ayi-10.
Isikhungo Sokufundela Sika-SONGZ
Isikhungo Sokuhlola I-SONGZ sise-SONGZ HQ, eShanghai China, sinamasethi angaphezu kwama-20 wezinto zokuhlola ezinkulu neziphakathi nendawo. Iningi lemishini lihamba phambili ekhaya. Umhubhe womoya wesimo sezulu, ibhentshi lokuhlola ukusebenza komoya, igumbi elilingana ne-anechoic kanye nezinye izinto ezisemqoka zifinyelele ezingeni eliphakeme lamazwe omhlaba. Inamandla okuphelele okuhlola ingxenye yomoya, uhlelo lwe-AC, i-HVAC nemoto yonke. Uhlelo lweCRM lwamukelwa esikhungweni sokuhlola ukuphatha inqubo yokuhlola, idatha nemishini. Ngo-2016, yamukelwa yi-ISO / IEC 17025: 2005 uhlelo lwensizakalo yaseChina yokugunyazwa kokuhlolwa kokuhambisana nokuthi ngo-2018, isikhungo selabhorethri se-SONGZ sigunyazwe yi-BYD njengeSitifiketi Sokuhlinzekwa Kwabasebenzi Belebhu.
Ibhentshi Lokuhlola Ukusebenza Komoya
Ibhentshi Lokuhlolwa Komoya
I-Vibration Test Bench
Isikhathi Esivamile. Ikamelo Lokuhlola Elinamanzi
Yangaphakathi Corrosion Test Bench
Isitifiketi Sokugunyazwa Kwelabhoratri esivela ku-CNAS
Isitifiketi Sokuqinisekisa Ukuhlinzekelwa Kwelabhoratri esivela ku-BYD
Isitifiketi se-PSA A10 9000
Umhubhe Womoya Wesimo Sezulu Sezimoto
Umhubhe womoya wesimo sezulu we-SONGZ uhlanganise uhlelo lokuhlola oluzenzekelayo kanye nokwenza imephu okokuqala eChina. Ngokuya ngobuchwepheshe obuphezulu bokuthwebula izithombe nobuchwepheshe bokucubungula izithombe, indawo ehlehlisiwe yalinganiswa futhi yabalwa ngesikhathi sangempela, okuthuthukise ngempumelelo ukusebenza kahle kokuhlolwa. Futhi ngumhubhe wokuqala wesimo sezulu ohlanganisa izinqwaba ezingama-60 kW DC zokushaja okusheshayo, okunikeza isiqinisekiso esinamandla sokwakhiwa kwezinhlelo ezintsha zokuphatha ezishisayo zebhethri yemoto.
Isikhungo somhubhe womoya wesimo sezulu sitholakala e-SONGZ HQ, eShanghai, eChina, ehlanganisa indawo eyi-1,650 m² futhi inotshalo-mali lwe-USD 17 million. Yasetshenziswa ngokusemthethweni ngoJuni 2018, futhi izinga layo lobuchwepheshe lihola emhlabeni jikelele.
Ukuhlolwa kokusebenza kokupholisa umoya kwemoto, isivivinyo sokushisa umoya semoto, isivivinyo sokushisa kwamakhaza emoto, isivivinyo sokulinganisela isilawuli somoya, isivivinyo sokwenza umsebenzi wokupholisa umoya / ukuvivinya ukusebenza kokuhlolwa, isivivinyo sokusebenza kokupholisa umoya, ukuhlolwa kokusebenza komoya ngaphansi kwezimo zokusebenza emadolobheni ajwayelekile , uhlelo lokuhlola umoya olunamandla wemoto.
Ukuklanywa nokwenziwa kwezinsizakusebenza konke kwamukela abahlinzeki abangaphansi okuhle kakhulu embonini. Ukulingisa kwelanga, i-chassis Dynamometer, ifeni enkulu, isistimu yokupholisa, igumbi lokuhlola neminye imishini emikhulu ingeniswe isuka eJalimane, ingalingisa i-30 ℃ - + 60 temperature lokushisa kwemvelo, i-5% -95% yomswakama wezemvelo, ne-spectrum egcwele yelanga umsebenzi wokulingisa futhi ungenza idivaysi yemitha yamandla kagesi yamasondo amane.
Umhubhe womoya awukwazi ukuhlola kuphela umoya opholile nezinhlelo zokupholisa zezimoto ezivamile zabagibeli, kepha futhi nokuhlolwa okumile kwamabhasi angaphansi kwamamitha ayi-10 ubude namathani ayi-10 ngesisindo.
Ucwaningo kanye UDintuthuko Umkhuba ye New Eizinzwa
1. Ucwaningo ngokusetshenziswa kwamafriji ahlukahlukene
Cha Isiqandisi Amandla we-Ozone Depleting(ODP) Amandla Okufudumala Emhlabeni Wonke (GWP)
2.Ukusetshenziswa kobuchwepheshe obuthuthukisiwe bomjovo we-vapor injection emkhakheni wemoto yomoya kagesi
Ngemuva kokusebenzisa i-enthalpy ekhulayo ngokugcwalisa ubuchwepheshe begesi, ekushiseni kwemvelo -25 ℃ isimo, uhlelo lokupholisa umoya lungaqhuba ukufudumeza okujwayelekile, uma kuqhathaniswa nemishini edlule ngaphansi kwesimo senani le-COP izokhuphuka ngaphezu kuka-30%, okuholela enkathini "yamakhaza" .
Ukwandisa i-Enthalpy ngokugcwalisa umdwebo wegesi we-AC
3.Phansi lokushisa futha:
Iphampu yokushisa evela emsebenzini wamanje izinga lokushisa elibucayi - 3 ℃, inganciphisa - - 20 degrees Celsius;
Ukusebenza kahle kwamandla kungcono kunokusetshenziswa kwamanje kwendlela yokushisa kagesi ye-PTC, ilitshe lingu-1.8.
4. Isicelo se-CO2 compressor - ipompo yokushisa okushisa okuphansi kakhulu / uhlelo lokushisa kwebhethri
Isicelo CO2 yemvelo esiqandisini kwemvelo;
I-rotor embaxambili ekabili - ukuminyaniswa kwesiteji, ukusebenza kahle kwevolumu ephezulu, vibration ephansi;
Ingcindezi ephezulu yangaphakathi ne-voltage yamaphakathi yangaphakathi ye-multimeter dc inverter drive, 40 ~ 100Hz, ukusebenza kwebanga lokuvama okubanzi; Ukuthembeka okuphezulu, ukusebenza kahle kwamandla amaningi, ukukhanya ness
Ububanzi obusebenzayo, ku - 40 ℃ izinga lokushisa kwemvelo lingaphansi kokushisa okujwayelekile.